Umthombo kunye noLawulo lweZifo zoTshintsho lweMihlaba
Umbulali oNcinci kodwa oqhelekileyo wee-Hardwood Trees
Umzila kunye nokubola komnye ungenye yeendlela eziqhelekileyo zesifo somthi esichaphazela imithi elukhuni. Iifungi ezininzi zinokubangela izimpande zengcambu kunye neyona nto ibangela ukubola okukhulu kwemithi yemithi kunye. Iintlobo zeengcambu ziqhelekileyo kwimithi emidala okanye kwimithi eyenzile ingcambu okanye ukulimala okungundoqo. I-root rots iphumelele kwiimeko ezimbi zomhlaba. Imithi ene-root root rot ayinakukwazi ukunyamezela imozulu yeemeko ezinzulu ezifana nesomiso olude, ixesha elide lemvula eninzi, okanye amaqondo okushisa aphezulu ngokungaqhelekanga.
Imithi eneengcambu kunye ne-butt rots (enye yeyona nkxalabo yi-Arrowillaria isifo sesisu) ngokuqhelekileyo inezinhlanganisela zesithsaba sokufa, ukulahlekelwa kunye / okanye ukutshatyalaliswa kwamahlamvu, kunye nokubonakala okungahambi kakuhle. Ngaphakathi, iingcambu ezigulayo kubonisa iipatheni zokuguquka nokubola. Imithi yokugula ingaphila iminyaka engenazo iimpawu kodwa, ngokuqhelekileyo, imithi ene-root root rot and decline and death in years. I-Conks (imizimba yokuvelisa) kwindawo okanye kufuphi nomgangatho wokuhla kweemithi izibonakaliso zokubola.
Unokulawula kuphela izifo zengcambu kwimithi ngokuthintela. Ukuthintela izifo zengcambu ngokukhusela umonakalo weengcambu kunye namanxeba kwizihlahla ezisezantsi. Xa utyalo imithi kwindawo apho imithi sele ifile ngayo izifo zengcambu, susa i-stumps ezindala kunye neengcambu ukunciphisa i-fungus yasasazeka. Cinga ukutshabalalisa umhlaba kunye ne-pesticide efanelekileyo njenge-methyl bromide okanye i-vapam ngokwemiqathango yendawo kunye nemimiselo yombuso kunye nomthetho.
Qhagamshelana nawe-agent yokwandisa isithili ngolwazi oluthile.
Izonyango eziphumelelayo zokuphilisa izifo zengcambu ezisisiseko kwimithi aziwa. Ngamanye amaxesha ukunciphisa izithsaba ngokunciphisa kunye nokuchumisa kunokunyusa ubomi bemithi echaphazelekayo ngokunciphisa imfuno eguquguqukayo kwiinkqubo ezingcambu zeenkqubo kunye nokukhuthaza umthamo wemithi yonke.
Ngaba i-Jupiter ingaba yinkwenkwezi?
IKali Paltan Mandir yaseMerutut